विजयपुरका मन्दिर बन्द छन् तर भक्तजन आएर हैरान !
विजयपुरका मन्दिर बन्द छन् तर भक्तजन आएर हैरान ! शनिबार र मंगलबार सयौ भक्तजन आउछन्
धरान : गएको चैत्र ११ गते देखि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसङै धरानको विजयपुरमा रहेका मठ मन्दिरहरू पनि बन्द छन् ।
असार १ गते देखि लकडाउन खुकुलो भएसङै अहिले मानिसको चहलपहल पनि बढेको छ । मानिसको चहलपहल बढेसङै विजयपुरमा रहेका मठमन्दिरहरूमा भक्तजन आएर पुजारीलाई हैरानी बनाउन थालेका छन् ।
धरान १४ विजयपुरमा रहेका दन्तकाली, र बुढासुब्बा मन्दिरमा आज बिहान सयौँ भक्तजनहरू पूजा गर्न र भाकल छिनाउन आए पछि मन्दिरमा समस्या भयो । सरकारले अहिले सम्म सार्वजनिक मठ मन्दिरहरू खुल्ला गर्न भनिसकेको छैन र यहाँका मन्दिरहरू पनि बिहान पुजारीले नित्य पूजा मात्रै गर्ने गर्दछ ।
तर लकडाउन खुकुलो भएसङै मन्दिरमा भक्तजनहरू आउन थाले पछि समस्या हुन थालेको बुढासुब्बा मन्दिर सम्भार संरक्षण परिषद्का सचिव उत्तम आलेले बताए । लकडाउनका कारण बुढासुब्बा मन्दिर बन्द हो तर मङ्गलवार र शनिवार धरान बाहिरबाट भक्तजन आएर हैरान पार्ने गरेको आलेको भनाई छ । गएको मङ्गलवार र शनिवार धरान बाहिर इटहरी, बाङ्गे, चक्रघट्टी सम्मका मात्रै आउँदै थिए तर आज त झापा भद्रपुर सम्मका भक्तजन भाले लिएर भाकल छिनाउन आए सचिव आलेले भने ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेपछि मन्दिरमा भक्तजन आउन थालेपछि उनीहरूले टाढाबाट आएको पूजा गरिदिनुस् भन्छन्, उनीहरूको कुरा सुनेर मन्दिरमा पूजा गर्न थाल्दा भिड बढी हाल्छ । यसले गर्दा समस्या भएको सचिव आले बताउँछन् । आज मात्रै बुढासुव्वामा २ सय भन्दा बढी भक्तजन आए ।
यसै गरी यता दन्तकाली मन्दिरमा पनि आज भक्तजनहरूको भिड थियो । बुढासुब्बा मन्दिरको जस्तै दन्तकाली मन्दिरमा पनि समस्या छ । मन्दिर बन्द छ तर भक्तजन आएर गेटमै पूजा गर्न थाल्छन् सम्झाउँदा भक्तजनले कुरै बुझ्दैनन् दन्तकाली मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका सचिव तथा मुख्य पुजारी विश्वराज खनालले बताए । दन्तकाली मन्दिरमा पनि दैनिक नित्य पुजा हुन्छ तर भक्तजनहरूका लागि मन्दिर खुल्ला छैन । टाढा टाढाबाट भक्तजन आउने भएकोले समस्या भएको छ ।
विजयपुरका मन्दिरका पुजारी भन्छन् मन्दिर बन्द छ पूजा र भाकल छिनाउन मन्दिर नआउनुस् । पछिल्लो समय विजयपुरमा त्यसै पनि भिड बढ्न थालेको छ । लकडाउनको बेला समेत विजयपुरमा आउजाउ गर्नेहरूको भिड अरू ठाउको तुलनामा बढी थियो । झन् यति बेला विजयपुरमा साँझ र बिहान मर्निङवाक र इभिनिङवार्क गर्नेहरूको समेत भिड बढेको छ ।
विजयपुरको मठ मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको भिड बढ्नुको मुख्य कारण धरान आउने कुखुरा बोकेर आउने भक्तजनलाई धरानको प्रवेशद्वार मै प्रशासनले रोक्नुपर्नेमा नरोकेपछि मन्दिरमा भिड हुने स्थानीय प्रेम पराजुली बताउँछन् । उनी भन्छन् “ आउनै नदिनु दिएपछि सामाजिक दुरी कायम गरे विजयपुरका मन्दिर व्यवस्थित तरिकाले खोलिनु पर्‍यो ।”
बुढासुब्बा मन्दिर जाने बाटो ३० फिट बन्ने
धरान वडा १४ ले 'विजयपुरको पेडा' उत्पादन गर्ने तयारी, मन्दिर आउने पर्यटकलाई कोसेली हुने
धरान आसपासका मठमन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरु बन्द
लकडाउनमा मन्दिर : बिहान बेलुका पुजारीको पूजा, अरुबेला ताला
लकडाउनका मन्दिर : बिहान बेलुका पुजारीको पूजा,अरुबेला ताला